40 Watt Anyanwụ na-akwado Ogwe Ọdụm Ogwe China Manufacturer
Nkọwa:Anyanwụ Kwadoro Na-adọba ụgbọala Mbadamba ọkụ,Igwe ọkụ na-acha uhie uhie,Anyanwụ na-adọba ụgbọala na bọmbụ ọkụ
Home > Ngwaahịa > Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm > Okpomọkụ na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala > 40 Watt Anyanwụ na-akwado Ogwe Ọdụm Ogwe
Ihe Nlereanya.: BB-LD-ST-40W
Ọkụ ọkụ ọkụ 40W anyị bụ ike kachasị ike nke anyanwụ nwere ike ịkwado bọmbụ ọkụ . Igwe Uhie Mbara Igwe nke 40 a ga-eji dochie ogwe ọkụ nke 120W gị ma ọ bụ ọkụ ndị yiri ya. Nke a na-eme ka anyanwụ na-adọba ụgbọala na-adọba ụgbọala, n'okporo ámá, ebe izugbe, ebe dị iche iche, ogige ntụrụndụ, ebe a na-emepe emepe, ebe egwuregwu na ebe ndị ọzọ ọ pụrụ isi ike, ọnụ ma ọ bụ dị ize ndụ iji mee ka ọkụ eletrik . Mee ka ìhè ahụ dịruo ogologo oge, nke a na-eme ka anyanwụ dị egwu na-enye ìhè nke na-enye ume ọhụrụ nke zuru oke maka ihe ọkụ ọkụ niile n'èzí. Nweta nkasi obi ọhụrụ n'ebe obibi gị na ebe ọrụ gị mgbe ị na-akwụ ụgwọ ike gị ọnụ ala. Mee ka ebe obibi gị na-enwu n'abalị. Igwe ọkụ dị elu site na ìhè ntanetị nke dị n'èzí na -emepụta ihe kacha mma n'ime ime obodo gị ma ọ bụ obodo ndị mepere emepe, ebe ọrụ, ubi, azụ ụlọ na ihe ndị ọzọ, na-eme ka ndị obodo nwee obi ụtọ.
Anyanwụ Kwadoro Na-adọba ụgbọala Mbadamba ọkụ Igwe ọkụ na-acha uhie uhie Anyanwụ na-adọba ụgbọala na bọmbụ ọkụ Anyanwụ na-adọba ụgbọala ọkụ Anyanwụ kacha mma na-adọba ụgbọala ọkụ Ike anyanwụ na-adọba ụgbọala ọkụ Anyanwụ na-akwado mbadamba ụgbọala ọkụ ọkụ Na-adọba ụgbọala ọkụ